क्वारेन्टिनमा चुक्दै सरकार : फैलिँदै कोरोना
राजकरण महतो /जनकपुरधाम
प्रदेश २ मा रहेका अधिकांश क्वारेन्टिनले सरकारले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन् । एउटा शौचालय ५० जनासम्मले प्रयोग गर्नुपरेपछि सुविधाको कुरा गर्नु व्यर्थ छ ।
भारतबाट नेपालीहरू ह्वारह्वारती गाउँ छिरिरहेका छन् । कोही लुकीछिपी खेतका आली–आली हुँदै सीमा कट्छन् भने कोही प्रहरी—प्रशासनको समन्वयमा गाउँ पस्छन् । वैधबाटो भएर आउनेलाई सीधै क्वारेन्टिनमा राखिन्छ । अवैध बाटो आउनेहरू घरमै लुक्छन् । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारले क्वारेन्टिनलाई पहिलो अस्त्र बनाएको छ ।तर, यही अस्त्र भद्रगोल बन्दा स्थिति डरमर्दाे बन्दै गएको छ ।
प्रदेश २ मा २ सय ९१ वटा क्वारेन्टिन छन् । कतै गुन्द्रुक खाँदेजसरी मान्छे राखिएका छन्, कतै खाने पानीसम्म छैन । कतै शौचालयको उचित प्रबन्ध छैन भने कतै सुत्नलाई खाटसम्म छैन । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्न पनि ढिलो भइरहेको छ ।जेठ १३ गतेसम्ममा प्रदेश २ मा २ सय ६८ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको समाजिक विकास मन्त्रालय, जनकपुरधामका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जनाए । १२ हजारभन्दा बढी मानिस सरकारको क्वारेन्टिनमा कोरोना भाइरससँग जीत हासिल गरेको ल्याब रिपोर्टको प्रतीक्षामा छन् । पाँच हजारभन्दा व्यक्ति आफ्नै घरमा क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
‘कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड–२०७६’ को अधिकांश क्वारेन्टिनमा उल्लंघन भएको छ । प्रदेश २ सरकार र यहाँका स्थानीय सरकार क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा चुकिरहेकाले क्वारेन्टिनबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने डर बढ्दै गएको छ ।
‘मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टिन नै छैनन्,’महोत्तरीको बर्दिबास सरकारी अस्पतालका मेडिकल अधिकृत अनिल फुयाँलले भने,‘क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको पनि कोरोना परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ।’ चेकजाँचमा ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेकाले अरूलाई कोरोना सार्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए । दु्रत चेकजाँचले मात्र कोरोना नियन्त्रण हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
धनुषाको नगराइनस्थित गंगुलीमा रहेको प्रदेश स्तरीय कोभिड—१९ क्वारेन्टिनलाई जेठ ७ गते सिल गरियो । कारण थियो– लगालग ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनु । संक्रमित ८ जना मध्य २ जना प्रहरी पनि छन् । डियुटीमा खटिएका एक असई र एक प्रहरी जवानमा पनि जेठ ११ गते कोरोना संक्रमण भेटियो । ८१ जना रहेको क्वारेन्टिनमा भारतको मुम्बई, पञ्जाब, हरियाणा, यूपीबाट आएकामध्ये ६ जनामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण भएको फेला प¥यो ।
‘कोरोना पुष्टि नभएकालाई डिस्चार्ज गर्दा फेरि गाउँमा कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने डरले क्वारेन्टिन सिल ग¥यौँ,’क्वारेन्टिन संयोजक सन्तोष ठाकुरले भने,‘क्वारेन्टाइ, डियुटीका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुइपर गरि १५४ जनाकोे एकैपटकमा स्वाब संकलन गरेर पठाएको छ । रिपोर्टको प्रतिक्षामा छौं । परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि कोरोना पुष्टि हुनेलाईआइसोलेसनमा पठाउँछौँ, नहुनेहरू घर जान्छन् ।’
भारतको मुम्बई र दिल्लीबाट नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि प्रदेश नम्बर २ लाई चुनौती थपिएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा क्वारेन्टिनबाटै कोरोना सर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । दुई महिनासम्म कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश त ल्यायो, तर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्वारेन्टिनहरू नैै कोरोना सार्ने अखडा बन्न पुगेका छन् । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू समूहमै बस्ने गरेका देखिन्छ ।
एक सातायता प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमा बढेर गएको छ । कम्तिमा १० हजार मानिस भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा लगेर राखिएको छ । प्रदेश २ को भूगोल सानो छ । तर, घना बस्तीसँगै जनसंख्या धेरै छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट आउने मानिसको व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको छैन ।
५० जनालाई एउटै चर्पी
सप्तरीको क्वारेन्टिनमा खानेपानीको उचित व्यवस्था छैन । उनीहरू एउटै धाराबाट पानी खाने गर्छन् । एउटै शौचालय ५० जनासम्मले प्रयोग गरिरहेका छन् । भारतीय सीमानजिक सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका—४, बेल्हीस्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनको अवस्था नाजुक छ ।क्वारेन्टिनमा रहेका ३५ वर्षीय युवकमा शुक्रबार राति कोरोना पुष्टि भएपछि सबैको स्वाब लिन शनिबार प्राविधिकसहित पुगेका स्वास्थ्य कार्यालय, सप्तरीका निमित्त प्रमुख दुनियाँलाल यादवले क्वारेन्टिनको अवस्था अत्यन्त खराब रहेको बताए । ‘बस्तीको बीचमा रहेको विद्यालयमा कोचाकोच गरेर मानिसहरू राखिएका थिए,’ यादवले भने, ‘कोठामा न झ्याल छ, न ढोका । बाँसका टाटीले घेरघार गरेर क्वारेन्टिन बनाइएको छ । बोराले बारेर दुइटा शौचालय बनाइएको छ । एउटा ट्युबवेल छ । स—साना कोठामा मान्छेलाई खाँदेर राखिएको छ ।’व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा अगाडिसम्म परिवारका मानिस दूध, दही र खानेकुरा लिएर भेट्न जाने गरेको पनि खुलेको छ ।
क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन घना बस्तीबाट टाढा, सय जनाभन्दा बढीलाई राख्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने, सञ्चार, स्वास्थ्य सुविधा, पानी र बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा न्यूनतम दूरी साढे तीन फिट हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छ ।
पर्सामा चेकजाँच सुस्त
प्रदेश २ को अतिप्रभावित क्षेत्र पर्सामा कोरोना संक्रमणको चेकजाँच सुस्त छ । पीसीआर परीक्षण प्रभावित हुँदा एक हप्तासम्म यहाँ कुनै परीक्षण भएन । पर्सा जिल्लामा जेठ ३ गतेसम्म ९१ जना संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसपछि भने भीटीएम किट अभावले स्वाब परीक्षण प्रभावित भयो । फेरि स्वाब परीक्षण हुन थालेपछि आइतबार यहाँ तीन जना संक्रमित थपिए ।
पर्सामा केही दिनयता रोकिएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउने क्रम आइतबारदेखि फेरि सुरु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्डेन्टेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले बताए । ‘मन्त्रालयबाट भीटीएम आएपछि गत बुधबारदेखि फेरि स्वाब संकलन गरेर परीक्षण भइरहेको छ ।’
शुक्रबार भारतबाट आएका २५ जनालाई महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा लगेर राख्यो । तर, त्यहाँ समुचित व्यवस्था नहुँदा उनीहरू २४ घण्टासम्म भोकै बसे । गौशालास्थित निगौल माविको क्वारेन्टिनमा राखिएका उनीहरूले पत्रकार गुहारेपछि मात्रै खानपिनको व्यवस्था भएको थियो । भारतको चेन्नई, हरियाणा र चण्डीगढबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरूले तातोपानीसमेत खान पाउने सुविधा पाएका छैनन् । स्थानीय बासिन्दा गगन मण्डलले भने, ‘क्वारेन्टिनमा बसेको छोराका लागि घरबाटै खाना लैजाने तयारी गरेको थिएँ । तर, वडाध्यक्षले रोक लगाएपछि छोरालाई हेर्न गएँ । त्यहाँ २४ घण्टा बित्दा पनि एक पाकेट चाउचाउसम्म दिइएको थिएन ।’
गौशाला नगरपालिका मेयर शिवनाथ महतोले सोचेभन्दा बढी मानिस भारतबाट एकैपटक आएपछि व्यवस्थानमा समस्या भएको बताए । ‘आएका सबैलाई सुरक्षित तवरले राख्न हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने ।
क्वारेन्टिनमा अमानवीय व्यवहार
‘हामीले केही माग्यौँ कि झर्किहाल्छन्, केही भन्नै नहुने जस्तो गरी हप्काउँछन् । बच्चाबच्ची समय–समयमा खानेकुरा र पानी माग्छन् । हामीले कहाँबाट दिने ?क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा बसेका मान्छेसँग माग्छौँ, तर उनीहरू हप्कीदप्की गर्छन्’– यस्तै गुनासो गर्छन्, जनकपुरको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेकाले आफूहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेको बताए । स्वस्तिक हस्पिटल भाडामा लिई बनाइएको क्वारेन्टिनमा बसेकाले खानेकुरा र पानी समयमा खान पाएका छैनन् । त्यहाँ सरसफाइमा ध्यान दिइएको छैन । शौचालयको अभाव छ । ‘हस्पिटल प्रशासनलाई भन्दा झर्किने र दुव्र्यहार गर्ने गरेका छन्,’ त्यहाँ बसेकाएक जना व्यक्तिले भने । सोही क्वारेन्टिनमा रहेकी एक महिलाले आफ्ना दुई बच्चालाई समयमै खाना दिन अनुरोध गर्दा झर्किने गरेको सुनाइन् । ‘मेरा दुई बच्चा छन्,’ उनले भनिन्, ‘बेलुका चाँडै खाना खाएर सुतिहाल्छन् । बिहान छिट्टै खाना माग्छन् । तर, यहाँबिहान १०÷११ बजे खाना दिन्छन् ।‘बच्चाहरूका लागि भए पनि छिटो दिनुस्’ भन्छु, तर साफ हप्काउँछन् ।’
प्रदेश २ का अधिकांश क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन् ।सरकारले तोकेको मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ ।